Toamasina Lehilahy iray matin'ny Coronavirus
Lehilahy iray antsoina hoe Kasaona Roger, 59 taona no namoy ny ainy noho ny coronavirus voalohany teto Madagasikara ny takarivan’ny 16 aprily teo, araka ny tatitra nataon’ny Pr Vololontiana Hanta omaly.
Ny 9 mey izy no niditra hopitaly. Mpiasan’ny fahasalamana mpiambina ny “parking” ao amin’ny Hopitalin’i Toamasina izy io. Nisy tosidrà sy diabeta izy, izay iray tamin’ireo “forme grave” roa tao Toamasina. Tao amin’ny Hopitaly Morafeno no nitsaboana azy, ary izao tsy tana izao ny ainy. Ny mpiasan’ny fahasalamana no miantsoroka ny fikarakarana ny razana fa ny vata hasiana no hiantohan’ny fianankaviana. Efa voalevina omaly ihany itompokolahy araka ny vaovao voaray, afaka nanatrika ny fianakaviana saingy voafetra kosa ny isa. Taorian’ny fahafatesana iray, dia roa ny “forme grave” na tena « forme critique » atahorana. Efa mihatony ireo marary roa ireo izay any Toamasina sy eny Anosiala, ary tsy manavy intsony saingy mbola misy “oxygène”, hoy ny Pr Vololontiana.
45 VOA TAO ANATIN'NY IRAY ANDRO
Ho an’ny 15 mey kosa, dia ny 11 ambiny tamin’ireo 67 nanaovana “contre-test” nataon’ny CICM dia nahitana 5 mitondra ny tsimokaretina, miampy ireo 5 tamin’ireo 55 efa vita, izany hoe 10 tamin’ireo 67 no voa. Nanao fitiliana vaovao miisa 120 ny CICM ka 16 tamin’ireo no voamarina fa voa. Olona nifandray akaiky (cas contacts) tamina olona efa naiditra hopitaly tamin’ny 10 mey izay monina teny Manarintsoa Isotry ireo 16 ireo. Nahitana tranga 3 ihany koa tany Toamasina. Miisa 24 izany voa voatilin’ny CICM. Ny an’ny IPM indray misy ny fitiliana eto Antananarivo sy any amin’ilay Laboratoire mobile any Toamasina ka 5 tamin’ny fitiliana 34 teto an-dRenivohitra no “positif”. Ny 16 tamin’ny fitiliana 40 natao kosa no voamarina fa voa tany Toamasina. 21 izany tranga vaovao voamarin’ny IPM ho an’ny andron’ny zoma 16 mey, ka 45 ny fitambarany miampy ny an’ny CICM.
TAFIAKATRA 304 NY VOA
Tranga vaovao 21 ihany koa no notaterina omaly, ka tamina fitiliana 103 no nahitana an’ireo. 61 ny fitiliana teto Antananarivo ka 15 tamin’ireo no voa, saingy olona avy any Toamasina avokoa ireo. 42 ny fitiliana tany Toamasina nahitana olona 6 vaovao. Fitiliana natao ny 16 mey ireo. Miisa 304 ny tranga rehetra nanomboka ny 19 martsa, ka 114 no sitrana ary 190 no mbola tsaboina, ary iray no namoy ny ainy.